Amalungu e-ANC ePhalamende asehoxile kwelokuphenywa kukaMvikeli woMphakathi | News24
Amalungu e-ANC ePhalamende asehoxile kwelokuphenywa kukaMvikeli woMphakathi
Cape Town – Uphenyo ngoMvikeli woMphakathi uBusisiwe Mkhwebane ngeke lusaqhubeka, ngemuva kokuba amalungu e-ANC ekomidini lezobulungiswa kanye nokuhlunyeleliswa kwezimilo eluvalile uhlelo ngoLwesithathu.
Kusukela ekuqaleni kohlelo, amalungu ayengaboni ngasolinye ngemuva kokuba awe-ANC ePhalamende edalule ukuthi kunemiqulu angakayitholi kodwa esitholwe iwona wonke amanye amalungu ePhalamende.
Ngemuva kwalokho, isigungu se-ANC sibe sesiphikisana namanye amalungu ePhalamende mayelana nokuthi kwavunyelwana ngokuthi ngomhlaka-10 Okthoba, kuzokwenziwa uphenyo ngokuziphatha kukaMkhwebane emhlanganweni wekomidi.
Ilungu le-ANC ePhalamende uMadipoane Mothapo lithe bavumelana kuphela ngokulubhekisisa lolu daba kwikomidi.
OLUNYE UDABA: Indoda isolwa ngokudlwengula umsizi wasendlini, yamphoqa ukuba alale nenja
Uzakwabo, uLoyiso Mpumlwana, uthi babengakasithathi isinqumo mayelana nokuthi ngabe sikhona yini isidingo sophenyo.
USihlalo wekomidi uMathole Motshekga – okwakhishwa isitatimende ngomhlaka-10 Okthoba esithi: “Ikomidi livumile ukuba kwenziwe uphenyo ngesicelo sokususwa kukaMvikeli woMphakathi”- naye useyaphika, njengoba evumelana nozakwabo be-ANC.
Amaqembu aphikisayo ePhalamende aweneme ngalokhu njengoba ethi kwasekuvunyelwene ngokwenziwa kophenyo.